ကျောင်းစာအုပ်န်ဆောင်မှုများ | အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ | မတ်ေတာ, လိင်နှင့်အင်တာနက်
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှအလယ်တန်းနှင့်မူလတန်းနှစ်ဦးစလုံးကျောင်းများမှကျောင်းကန်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒ၏အတွေ့အကြုံနှင့်လိင်ပညာရေးအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ် neuroscience နှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံသုတေသနအသုံးပြုတဲ့ရှေ့ဆောင်ပညာရေးပရဟိတဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်အသိပညာအားဖြင့်သင်တို့၏ကြောငျးသားမြားအတွက်ခံနိုင်ရည်တည်ဆောက်ကူညီခြင်းနှင့်မိဘများကသူတို့ရဲ့သားသမီးတို့အဘို့တစ်စုစည်းထောက်ခံမှု system ကိုသက်သေပြဖို့ကျောင်းနှင့်အတူပူးပေါင်းကူညီနိုင်သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ, လူမှုရေး, ကျန်းမာရေး & စီးပွားရေးဇုန်သို့မဟုတ်လိင် & ဆက်ဆံရေးပညာရေးအတွက်ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် 11 နှစ်အသက်အရွယ် 18 ကနေကျောင်းသားများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တုံ့ပြန်မှုသင်ခန်းစာများနှင့်အသစ်သောဆက်ဆံရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မိဘ (RSHP) အစီအစဉ်ဖြည့်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုကသူတို့ကိုပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်သွားလာနိုင်ရန်အတွက်အသိပေးရွေးချယ်မှုအောင်ကူညီပေးဖို့ကျောင်းသားပညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ , ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ဥပဒေရေးရာနှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးသက်ရောက်မှုကျန်းမာရေးသတိထားဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအသုံးပြုမှုရာ၌ကျော့ကွင်းထောင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ကူညီရှာတွေ့ခံရမှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးရှိအတွက်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်ပါ။
ငါတို့သည်လည်းမိဘများကဒီအထိခိုက်မခံခေါင်းစဉ်အပေါ်သူတို့အခက်ခဲပြောဆိုမှုများရှိသည်ဖို့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကိုအတူအိမ်မှာသူတို့သားသမီးတွေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လုပ်ပိုင်ခွင့်။ ဒီအဆုံးကျနော်တို့အခြေအနေတွင်သို့ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနထားရန်ဆေးဝါးနှင့်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူများနှင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အင်တာဗျူးတွေကိုအသုံးပြုပါ။ ကျနော်တို့ tools များနှင့်မိဘ, ဆရာ, ဆရာမများနှင့်လူငယ်များအဘို့အထောကျပံ့အကူ။ အဆိုပါပစ္စည်းများလည်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်-based ကျောင်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါဆုကြေး Foundation မှလက်ရှိ P2, S7 /2နှင့် S3 /5အဘို့အသီးအသီး6သင်ခန်းစာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစကော့တလန်နှင့်အိုင်ယာလန်ပြည်နယ်ကျောင်းများ၏နံပါတ်တစ်ရှေ့ပြေးစီမံကိန်းပို့ချနေသည်။ အတွေ့အကြုံလိင်ပညာရေးဆရာမဆီက input နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ခန်းစာဆရာဦးဆောင်သောသို့မဟုတ်ကျောင်းသားဦးဆောင်တဲ့သင်ခန်းစာများများအတွက်သင့်လျော်သောစီစဉ်ထားလုပ်နေပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းပြသနေသည်။
အဆိုပါသင်ခန်းစာများကိုအဆိုပါဖြစ်ပေါ်နေသောဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်သိတော့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ပါ။ ဆရာများကျောင်းသား '' လိုအပ်ချက်များနှင့်စွမ်းရည်၏သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် အခြေခံ. သင်ခန်းစာများလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါရှေ့ပြေးစီမံကိန်းအဆုံးမတ်လ 2019 မှီတိုငျအောငျကို run ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးစီးတွင်နှင့်ဆရာ, ဆရာမ, ကျောင်းသား, ကျောင်းသူများနှင့်မိဘများဆီက input နှင့်အတူအကဲဖြတ်ပြီးနောက်ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေများအတွက်ကျောင်းများမှသင်ခန်းစာများရရှိနိုင်စေရန်စီစဉ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလက်ရှိအချိန်တွင်မည်သည့်အစိုးရရန်ပုံငွေမခံမထားဘူး။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှတစ်ဦးဟောပြောပွဲအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စု fit မှသင့်လျော်စွာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့အုပ်စုငယ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးတစ်နှစ်အုပ်စုကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကျောင်းများအတွက်အပြန်အလှန် session ကိုအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ 50-60 မိနစ်ကြာရှည်။ နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းပြသနေသည်။ ကျနော်တို့ကျောင်းရဲ့ preference ကိုအညီတစ်ခုတည်းနှင့်ရောထွေးနှစ်ဦးစလုံးကျားအုပ်စုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပစ္စည်းများမတူကွဲပြားမှု-friendly ဖြစ်တယ်။
S2 / 3: sexting: ကျန်းမာရေးနှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များ
အဘယ်ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် porn အပေါ် bingeing ထံမှ overstimulation အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်
/5S6: စမ်းသပ်အပေါ် Porn; အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ် Bing ၏စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု
ကို 'အာရုံကိုစီးပွားရေးကို' '၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု Critiquing
လိင်နှင့်မီဒီယာ: ကြော်ငြာဝေဖန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ; သီချင်းဗီဒီယိုများ; အဆိုပါ porn စက်မှုလုပ်ငန်း; ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့ဘယ်လို
24 နာရီဒစ်ဂျစ်တယ် detox ဆိတ်ကွယ်ရာ2အစည်းအဝေးများ c.7 နေ့ရက်ကာလ၌: အဆိုပါစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုဖုံးလွှမ်း။
အပိုင်း 1 လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်နဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် "ဖြားယောင်းဒီဇိုင်း on" သုတေသနအကြောင်းကိုကနဦးဆွေးနွေးမှုလည်းပါဝင်သည်; အဆိုပါ detox လုပ်ခြင်းအားအပေါ်အကြံပေးချက်များ
အပိုင်း 2, သူတို့ကွားအပတ်အတွင်းကဤ 24 နာရီ detox ကြိုးစားနေထံမှကြုံတွေ့ရာပေါ် debrief
အကြှနျုပျ၏ Fantastic, ပလတ်စတစ်ဦးနှောက်: အဟောင်းနှင့်အသစ်ဦးနှောက်၏အလုပ်နားလည် (လိုသောနဲ့စဉ်းစား)
သူတို့ကွားအပတ်အတွင်းကဤ2နာရီ detox ကြိုးစားနေကြုံတွေ့ဘယ်သို့သောအကြောင်းအပိုင်း 24 ဆွေးနွေးမှု
အလားအလာရှိသောပြဿနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့ပျက်ဆီးနှင့်မဟာဗျူဟာန်းကျင်ကနောက်ဆုံးသက်သေအထောက်အထားများနှင့် ပတ်သက်. မိဘများပြောဆိုပါ။ ဤသည်အိမ်တွင်ဆွေးနွေးမှုများများအတွက်ရေခဲကိုချိုးဖျက်ကူညီပေးသည်
ကျေးဇူးပြု ထိတှေ့ အခမဲ့တိကျမ်းစာ၌လာသည် quotation အကို။ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှလည်းသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုံးစံ-ဒီဇိုင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပေးနိုင်ပါသည်။